Raha tsiahivina dia efa nanomboka tamin’ny taona 2019 no niara-niasa ny roa tonta, tao anatin’ny fankalazana ny oktobra vonin-draozy, volana iadiana amin’ny homamiadana mpahazo ny nono. Nisy ny fanentanana nataon’ny Fondation Akbaraly nandritra izany narahin’ny fitiliana maimaim-poana ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza, fisorohana azo hatao mialoha ho an’ny vehivavy rehetra. Fikambanam-behivavy maro no nahazo tombontsoa tamin’izany ka anisan’ireny ny FIVAMI na ny fikambanan’ny vadin’ny miaramila. Tsy latsaky ny 500 isa ireo vehivavy tao amin’ity fikambanana ity no nahazo tombontsoa tamin’izany. Mbola hitohy mandritra ity taona 2020 ity izany fiaraha-miasa izany haharitra roa taona. Hisy indray araka izany ny fanentanana sy fitiliana ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza hataon’ny Ong La Vita Per Te sy ny Fondation Akbaraly ary ny fikambanan’ny vehivavy vadin’ny miaramila eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fitetezana faritra. Tafiditra ao anatin’izany ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo ankizy lasibatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Anisan’ny nanao sonia izao fifanekem-piaraha-miasa izao ny Général de Division Rakotonirina Théophile Justin an-daniny, notronin-dRtoa Cinzia Catalfamo Akbaraly, filoha mpanorina ny Fondation Akbaraly an-kilany.